Daawaha birta Zirconium, Zr-Fe - Goodao Technology Co., Ltd.
Daawaha birta Zirconium
Zirconium iyo birta waxay sameysmeen dhisme xasiloon oo FeZr2 ah (45.1% ZR) oo leh bar dhalaal ah 1650 ℃. At 16% Zr, barta dhalaalida eutectic waa 1330 ℃. Barta barafka eutectic waa 940 ℃ oo ah 84% Zr.
Maaddaama loo yaqaan 'deoxidizer' iyo wax lagu daro 'alloy', birta loo yaqaan 'zirconium iron' waxaa loo adeegsadaa daawaha heerkulka sare ee qaaska ah, birta birta ah ee xoogga sare leh, birta xoogga sare leh iyo bir tuurka ah, ka dibna loo adeegsado tikniyoolajiyadda atomiga, soo saarista duulista, tikniyoolajiyadda iwm.
Hore: Daawada Aluminum Aluminium, V-Al
Xiga: Aluminium Cobalt daawaha, Al-Co
Budada dawada Zirconium Birta
Warshadaha budada ah ee loo yaqaan "Zirconium Iron alloy"
Warshadda budada ah ee loo yaqaan 'Zirconium Iron alloy'
Soo saaraha budada dawada ee Zirconium Iron
Soosaarayaasha budada dawada birta ah ee Zirconium
Zirconium Birta daawaha birta Qiimaha
Quotes Powder alloy Zirconium Iron